Su'aal: Waraabow iyo AIDS
Author Topic: Su'aal: Waraabow iyo AIDS (Read 9728 times)
« on: June 19, 2008, 09:09:08 AM »
Maxay xirrir ah oo ay leeyihiin cudurka soomaalidu u taqaan waraabowga iyo HIV aIds-ku?
Re: Su'aal: Waraabow iyo AIDS
« Reply #1 on: June 24, 2008, 05:49:59 PM »
Cudurka waraabowga ama isfiilitada sida dadka qaar u yaqaanaan waa cudur ka mid ah cudurrada lagu kala qaado galmada (STDs).
Xiriirka ka dhaxeeyo cudurkan iyo AIDS-ka waa in ay ka mid yihiin cudurrada lagu kala qaado galmada, waxaa intaa dheer in cudurka waraabowga ay dhib noqon karto in si sahlan looga helo loogana baaro qofka qaba cudurka AIDs-ka khaas ahaan hadii waraabowga uu yahay midka maskaxda galo oo neerfaha wax gaarsiiyo (neurosyphilis).
Warbixin intaa dheer oo ku saabsan cudurrada galmada la isku qaadsiiyo halkaan ka akhriso. http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=245.0
Qoraal looga hadlayo cudurka waraabowga dhawaan ayaan ku soo dari doonnaa webka ee la socod wanaagsan.
« Reply #2 on: July 15, 2008, 11:34:25 AM »
Waa kan qoraalkii aan kaa ballan qaadnay ee ka faaideysi wacan
Views: 7089 December 16, 2008, 07:11:42 PM
Views: 2754 June 10, 2011, 06:01:22 PM
National (Somali) Programme Analyst- HIV/AIDS/Youth, Somalia (UNFPA)
Views: 3174 June 17, 2011, 08:55:15 PM
Views: 9050 July 10, 2009, 07:23:12 PM
Rumours creating fear among parents that measles vaccination causes HIV/AIDS
Views: 2450 April 11, 2011, 12:54:31 PM